Sujet Malagasy – série A, session 2009 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Sujet Malagasy – série A, session 2009 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Sujet Malagasy – série A, session 2009 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
1. Milaza tara-kevitra telo fiventin’I Rado.
2. Fenoy amin’alalan’ireto teny na andian-teny mitovy hevitra aminy ireto ny fafana.
- marina, gaga, tsara fo, an-tsitrapo, matotra, mpanao ratsy.
Hoy ny mpandinika iray: “Ny aina no andevon-karena”. Fakafakao sy tsikerao.
Ny Asa soratra sy ny fiaraha-monina
Tadidintsika ny herim-po sy fahasahiana nasehon’ny mpanoratra (…) nanohitra tsy niato ny tsy fahaiza-mizaka ny tsy fitoviam-pinoana, ny fanaovana tsindry hazo lena, ny kely tsy mba mamindro, ny fanararaotam-pahefana, ny didiko fe lehibe, nitera-doza teo amin’ny fiaraha-monina misy azy.
Raha fintinina ary izay voalaza dia fitaratry ny fiaraha-monina ny asa soratara. Hita ao ny finoany, ny fanentanany, ny fitiavany, ny ahiahiny, ny firehan-tsainy, ny fahendreny, ny ambarotongam-pahaizana amam-pahalalana takatry ny sainy.